Myanmar Monk Student Association: January 2012
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ younger on Tuesday, 31 January 2012
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ဒဿနစာစုများ |
ငါ လုပ်တာ မင်း ခေါင်းပုံဖြတ်၊ ငါ ကြမ္မာ မင်း ရိုက်ချိုးထား၊
မင်းဟာ အပြင်းစားသူခိုး ဆက်လက်ဓါးရိုးမကမ်းတော့ပြီ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသိစေရန် အချက်ကြီး ၁၇ ချက်
၁။ ကျောင်းသားများသည် ကျောင်းသို့လာပါက မိမိတို့ကျောင်းသားကဒ်များကို ချိတ်ဆွဲလာရမည်။ သို့မှသာ အခန်းတွင်ပေတံမရှိပါက ကျောင်းသားကဒ်နှင့် တားနိုင်မည်။
၂။ ကျောင်းသားများ ကျောင်းချိန်အတွင်း အခန်းပြင်ပ ထွက်ခြင်းမှ တားမြစ်သည်။ သို့မှသာ အခန်းထဲမှ ကောင်မလေးများ အား ငမ်းနိုင်မည်။
၃။ ကျောင်းသားများ ကျောင်းသို့ လွယ်အိပ်မပါပဲမလာရ။ သို့မှသာ မိမိတို့လွယ်အိပ်များကို ခေါင်းအုံးအဖြစ်အသုံးပြုပြီး အိပ်နိုင်မည်။
၄။ ကျောင်းသားများ Calculator ကို မမေ့မလျော့ ယူဆောင်လာရမည်။ သို့မှသာ အခန်းတွင်း Calculator ဖြင့် (random) ဖဲရိုက်နိုင်မည်။
၅။ မိမိတို့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရမည်။ ထို့ကြောင့်ညစ်ပတ်အောင်အရင်လုပ်
၆။ ဆရာများ စာသင်ချိန်တွင် အိပ်ငိုက်ခြင်းမပြုရ။ အိပ်ချင်က တစ်ခါထဲမှောက်အိပ်နိုင်သည်။
၇။ ကျောင်းအတွင်းဆေးလိပ်သောက် ကွမ်းစားခြင်းမပြုရ။ မမြင်ကွယ်ရာတွင်သာလုပ်ဆောင်ရန်။
၈။ စာမေးပွဲဖြေဆိုချိန်တွင် ခိုးချခြင်းမပြုရ။ ဘေးလူထံမှသာ လျှင်ရင် လျှင်သလို ကူးချနိုင်သည်။
၉။ ကျောင်းရှိ ဆရာမများအား စနောက်ခြင်းမပြုရ။ မှတ်ချက်... ဆရာမတွင်လည်း အသည်းနှင့်ဖြစ်သည်။
၁၀။ ကျောင်းသားများ ၇၅ % မပြည့်ပါက စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်မပြု။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းခေါ်ချိန်ပြည့်အောင်တက်ရမ ည်။ မပြည့်ပါက ကော်ရရှင်ဖြင့် Roll Call ပြင်ခြင်း၊ ဆရာမ များထံမှတောင်းခြင်း၊ အခန်းတွင်းသူငယ်ချင်းများမှ အော်ပေးချင်းတို့ ပြုနိုင်သည်။
၁၁။ ကျောင်းသားများစာသင်ခန်းအတွင်းမုန့်စားခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) ခွင့်မပြု။ ဆရာများလည်း ဗိုက်ဆာတတ်သည်။
၁၂။ ကျောင်းသားအချင်းချင်းခိုက်ရန်ြ ဖစ်ပွားခြင်းမပြုရ။ ပြင်းထန်စွာ သတိပေးခြင်းခံရမည်။ မရလျှင် လက်ဝှေ့စင်ထောင်ကာ ထိုးခိုင်းမည်။ အနိုင်ရသူကို ထိုက်တန်စွာချီးမြှင့်မည်။
၁၃။ ကျောင်းသားများအပြစ်လုပ်ရာတွင် လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်းကို ဗွေမယူလို။ ကျောင်းအုပ်ကြီးမှာ လက်မှတ်စုဆောင်းတတ်သော ၀ါသနာရှိသည်။
၁၄။ စာမေးပွဲကျသော ကျောင်းသားများ စိတ်ဓါတ်ကျစရာမလိုပါ။ နောက်တက်လာသော ကျောင်းသားများသည် မိမိတို့အား နှစ်ကြီးသမားများ ဖြစ်သောကြောင့် " ရှိန် " ကြသည်။
၁၅။ စုံတွဲများ ကျောင်းလာပါက လူမြင်မတော်သော အပြုအမူများမပြုရ။ အခန်းတွင်းရောက်မှသာ ကြိုက်သလိုနေနိုင်သည်။
၁၆။ ကျောင်းသားများ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းကို ကျွမ်းကျင်အောင် လေ့လာသင်ယူထားရမည်။ သို့မှသာ ကျောင်းပြိုပါက တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်းကူညီနိုင်မည်။
၁၇။ ယနေ့ခေတ်ကျောင်းသားများသည် သချာင်္အားနည်းနေကြသည်။ ထို့ကြောင့်အချိန်ပို အဖြစ် အဆောင်တွင် ညစဉ်ဖဲရိုက်ရမည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Thursday, 19 January 2012
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ ပညာရေး, ပညာရေးသတင်း |
အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများရှိ အလုပ်လက်မဲ့ အများဆုံး ဘွဲ့ဒီဂရီများ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုရှိ ကျောင်းသားများသည် ကောလိပ်ကျောင်းများတွင် ထင်ရှား ကျော်ကြားသော ပလေတို၊ ရှိက်စပီးယား စသည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်များ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားမှုများကို လေ့လာရန် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိကောင်းရှိခဲ့ကြမည်။
သို့သော် ဂျော့ခ်ျတောင်း တက္ကသိုလ်မှ ပြုလုပ်သော သုတေသန တွေ့ရှိချက်တွင် ၄င်းပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ကြီးများရဲ့ Arts, Humanities and Architecture ဘာသာရပ်တို့ဖြင့် ဘွဲ့ရများသည် အလုပ်လက်မဲ့ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
အလုပ်လက်မဲ့ အများဆုံး ဘွဲ့ရများမှာ ဗိသုကာပညာရပ် (၁၃.၉) ရာခိုင်နှုန်း၊ အနုပညာ ဘာသာရပ် (၁၁.၁) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် လူမှုရေးဘာသာရပ် (၉.၄) ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျန်းမာရေး (၅.၄) ရာခိုင်နှုန်း၊ ပညာရေး (၅.၄)၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ် ဘာသာရပ်တို့မှာ (၇) ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြသည်။ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှု အကောင်းဆုံး ဘာသာများမှာ စီးပွားရေးနှင့် အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ် ဘွဲ့ရများ ဖြစ်သည်။
“မိဘတွေက သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဘာသာရပ်ကို ယူဖို့ပြောကြပါတယ်၊ လူလတ်တန်းစားတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံ့သားကောင်းဖြစ်ဖို့၊ အသက်ရှင်နေစဉ်ကာလ အတွင်း ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေလုပ်ဖို့ ပြောကြတယ်၊ အားလုံးမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ အကြောင်း ပြောတဲ့အခါ စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်” ဟု သုတေသန စစ်တမ်းပြုလုပ်ခဲ့သည် Anthony P. Carnevale ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဂျော့ခ်ျတောင်း တက္ကသိုလ်မှ ပြုလုပ်သော သုတေသနသည် ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုနှစ်များအတွင်း ကောက်ယူခဲ့သော ဒေသကောလိပ်များ၏ သုတေသန စစ်တမ်းများကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။
ယခင်က အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုတွင် ဒေသကောလိပ်များသည် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သော သူများ၏ ပညာရှမှီးရာ နေရာဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါတွင် လူလတ်တန်းစားများနှင့် အထက်တန်းလွှာတို့ မိသားတို့၏ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာ နေရာဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဤကဲ့သို့ ကျောင်းသားများ၏ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်လာရ ခြင်းမှာ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း ကျောင်းသားများ၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးလာခြင်းကြောင့် အကြွေး ပြန်မဆပ်နိုင်မှု များပြားလာခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူဘာသာရပ်၊ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တို့သည် အလုပ်အကိုင် ရရှိ နိုင်မှုတွင် အခြားသော ဘာသာရပ်များထက် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ သာကြောင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဟီဒေါတက္ကသိုလ်တခုတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသားတဦးမှ “ထိုင်းမှာလည်း Social Science ဘာသာရပ် ဘွဲ့ရတွေ အနေနဲ့ ပညာရပ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်အကိုင် ရှိနိုင်မှု အခက်အခဲရှိတယ်၊ ကျနော် under grade မှာ လူမှုရေးဘာသာရပ်ကို ယူခဲ့တယ်၊ ဘွဲ့ရတာ တနှစ်ကျော်ပြီ ၊ အလုပ်အကိုင် မရှိသေးဘူး” ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၁၉၉၀ ကျော်ခုနှစ်များအတွင်း ကျောင်းသားများ အကြိုက်ဆုံးဘာသာရပ်များမှာ ဆေး၊ စစ်မှု၊ ကွန်ပျူတာ ဘာသာရပ် တို့ဖြစ်ကြသည်။ ယခုအခါတွင် အလုပ် အကိုင်ရရှိနိုင်မှု အခက်အခဲတို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်များတွင် တက်ရောက်သည့် ကျောင်းသားဦးရေ များပြားလာခဲ့သည်။
Sources; New study shows architecture, arts degrees yield highest unemployment.
ထိုင်းပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ရန် ဘန်ကောက်ပို့ သတင်းစာ မကြာမကြာ ရေးသားလာ
ဇန်န၀ါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ထုတ် ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာကြီးထဲမှာ ထိုင်းလူမျိုးတွေအနေနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခဲ့ပါက ကိုယ်ရမယ့် အခွင့်အလမ်းများ ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း အယ်ဒီတာ အာဘော်မှ တင်ပြလိုက်ပါသည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့ထုတ် ဘန်ကောက် သတင်းစာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံတ၀ှမ်းက တက္ကသိုလ်အကြီးများ ညီလာခံတွင် အာဆီယမ် စီးပွားရေးဇုန် ပေါ်လာသောအခါ ထိုင်းလူငယ်များ အနေဖြင့် ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ပညာရှင်များမှ သတိပေးထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထိုင်းတနိုင်တက္ကသိုလ်တွေ အနေဖြင့် သင်ရိုးညွန်းတမ်းကို အနီးစပ်ဆုံး တူညီအောင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိက၀တ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ထိုင်းအစိုးရသည် သက္ကရာဇ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကို အင်္ဂလိပ်စကားပြောနှစ် အဖြစ်သတ်မှတ် ထားပါသည်။ အချို့သော အထက်တန်းကျောင်းများတွင် အင်္ဂလိပ်စကားပြော နိုင်ငံခြားသားဆရာများကို ငှားရမ်းအသုံးပြု နေပြီဖြစ်သည်။
ယနေ့ ဘန်ကောက်ပို့စ် အယ်ဒီတာ အာဘော်တွင် ထိုင်းပညာရေးစနစ် ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့် အလုပ်သမားများမှာ လုပ်ခလစာ အနည်းငယ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်း အခြားသော ဖွံ့ဖြိုးသည့် နိုင်ငံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ကာ ထောက်ပြခဲ့သည်။
ဂလိုဘယ် လိုင်ဇင်းရှင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း ထိုင်းအလုပ်သမားများမှာ နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ လစာနိမ့် အလုပ်သမားအဆင့် ရှိကြောင်းထောက်ပြခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံကျောင်းများတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကားသင်ကြားရေးအတွက် တိုက်တွန်းထားသည်။ လာမည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အာစီယံ နိုင်ငံများ၏ နယ်စပ်များ လုံးဝ ဖွင့်သောအခါတွင် ထိုင်းလူငယ်များအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်ကောင်း ရရှိနိုင်မှုကို စိုးရိမ်မိကြောင်း တင်ပြထားသည်။ ထိုင်းတက္ကသိုလ် အဓိပဓိများမှလည်း ဘွဲ့ရအများစုသည် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို မပြောဆိုနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြခဲ့ကြသည်။
ထိုင်းမီဒီယာများသည် ထိုင်းပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် စဉ်ဆက်မပြတ် တောင်းဆိုနေစဉ် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုစတင်ရန် တောင်းဆိုလာသည်ကို တွေ့ရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်တွင် ပညာရေး ကဏ္ဍသည် ငွေကြေးသုံးစွဲမှု အများဆုံးဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာရေး အသုံးစရိတ်မှာ အနိမ့်ဆုံးတွင် ရှိနေသည်။
မြန်မာ လူငယ်လူရွယ်အများစုမှာလည်း အစိုးရ ပညာသင်ကျောင်းမတက် နိုင်သည့်အတွက် တနိုင်တပိုင် ပညာရေးတွင် တက်ရောက် သင်ကြားနေကြရသည်။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ှလည်း တနိုင်တပိုင် ပညာရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံသည် ဒေသတွင်း နိုင်ငံရေး၊ စိးပွားရေး၊ လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ အညီ နိုင်ငံ၏ ပညာရေး ကဏ္ဍကိုလည်း အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုဖြင့် မြှင့်တင်ရန် တာစူနေချိန်တွင် မြန်မာ့ ကလေးငယ်အများစုမှာ ကျောင်းပညာ မသင်ကြားနိုင်သည်ကို တွေ့ရသည်။
Sources; Losing out for lack of English
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး Ph.D. ဘွဲ့အတွက် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ် ၁၀ ခု
စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး စစ်ရေး အကျပ်အတည်းများ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဆူပါပါဝါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ စိန်ခေါ်မှုတွေ ကြုံတွေ့နေရသော်လည်း၊ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များက တကမ္ဘာလုံးမှ ကျောင်းသားတွေ အတွက် အားကျရွေးချယ်စရာအဖြစ် ဆက်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
Teaching, Research and International Policy (TRIP) အဖွဲ့နှင့် Foreign Policy မဂ္ဂဇင်းကကမ္ဘာတက္ကသိုလ် အသီးသီးမှ IR ပညာရှင်များနှင့် ကျောင်းသားများကြား ၂၀၁၁ ခုနှစ် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုအရ၊ ‘နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ် Ph.D. ဒေါက်တာဘွဲ့’ သင်ယူဖို့ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ် ၁၀ ခုမှာ Ivory Tower ခေါ် အမေရိကန်တက္ကသိုလ် ကြယ်စင်စုကြီးတွေသာဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိကြရသည်။
နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး Ph.D. ဘွဲ့ယူဖို့ အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ် ၁၀ ခုကို အစဉ်အတိုင်း ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Admitted class size: 14-26
Average time to graduate: 5-6 years
Funding: All admitted students considered for fellowships, amounting to full/partial tuition and stipends
Star professors: Robert Bates, Jeffry Frieden, Stephen M. Walt
Admitted class size: 40
Average time to graduate:5years, minimum
Funding: Full tuition funding for four years, including living stipends
Star professors: Robert Keohane, Uwe Reindhart, Anne-Marie Slaughter,
Admitted class size: 12
Average time to graduate: N/A
Funding: Full tuition and living stipend provided
Star professors: Francis Fukuyama, Stephen Krasner, Condoleezza Rice
Admitted class size: 20
Average time to graduate: 5-7 years
Funding: Guaranteed five-year fellowship, including living stipends
Star professors: Jagdish Bhagwati, Robert Jervis, Jeffrey Sachs
Admitted class size: 23
Average time to graduate: 6.7
Funding: Guaranteed funding for five years. The first four years of tuition are guaranteed, followed byauniversity dissertation fellowship
Star professors: Bruce Ackerman, David Cameron, Bruce Russett
Admitted class size: 15-20
Funding: Full tuition, plus $21,000 for five years, including $3,000 summer funding
7. University of California/San Diego
Funding: Guaranteed for four years, followed by teaching assistantships
Star professors: Peter Gourevitch, Larry Krause, Susan Shirk
8. University of California/Berkeley
Admitted class size: 18-26
Average time to graduate: 5-6 years, including 1 year of field research
Funding: Five years of funding via fellowships, research, and teaching assistantships, (contingent on California residency)
Star professors: Barry Eichengreen
9. University of Michigan/Ann Arbor
Admitted class size: 12-17
Average time to graduate: 4-6 years
Funding: Five years of funding, includingafellowship for the first year
Star professors: Paul Courant, Kenneth Lieberthal Website: http://www.lsa.umich.edu/polisci/
Admitted Class Size: 7-11
Funding: Five years of funding, including nine-month stipends
Star professors: Daron Acemoglu, Barry R. Posen, Daniel Posner